China HELLO II လီသီယမ်ဘက်ထရီ Tattoo Pen ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ မော်လမြိုင်
ခြေလျင် Switch & Clip ကြိုး
အံဆွဲ ၅ ခုနှင့်အံဆွဲ ၇ ခုကိုတက်တူးထိုးကား ...
ပျော့ပျောင်းသောအမြှေးပါးနှင့် LBB Tattoo အပ်သောအရာတစ်ခု
Professional Tattoo Thermal Copier၊ ကူးပြောင်းနိုင်သောပရင်တာ ...
ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည် ၁၈၀၀ mAh အချိန်နှင့်မှတ်ဉာဏ်အစားထိုး ...
HELLO II လီသီယမ်ဘက်ထရီ Tattoo ကလောင်
အသားတင်အလေးချိန်: ပတ်ပတ်လည်: 209g စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 345g
အရွယ်အစား - ၁၅၃ * ၃၂ မီလီမီတာ (လက်ဆွဲသည့်အပိုင်းအတွက် ၃၁.၅ - ၃၂.၅ မီလီမီတာ)
အထုပ် - လီသီယမ်ဘက်ထရီတက်တူးထိုးဘောပင် + USB ပါဝါကြိုး
အရောင်: အနက်ရောင် -sliver- ရွှေ
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - Lithium ဘက်ထရီပါ ၀ င်ပြီးတက်တူးထိုးထားသောကလောင်တံကို Lithium ဘက်ထရီ၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်နေရာတွင်အစားထိုးနိုင်သည်။
၁။ Android USB ဒေတာကေဘယ် ၂။ စျေးကွက်ထဲရှိပေါင်းစပ်ထားသောအပ်များအများစု (Cheyenne standard size) ၃။ ဖွဲ့စည်းမှုတွင်အားသွင်းခေါင်းမရှိသဖြင့်သင်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းနိုင်သည့်ခေါင်းကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. ပစ္စည်းအရည်အသွေး: လူမီနီယမ်အလွိုင်း;
၂။ လုပ်ငန်းစဉ် - စီအင်စီအနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောပန်းပုထုခြင်း၊
၃။ အားသွင်းအင်တာဖေ့စ် - Android USB ကေဘယ်ကြိုး၊
4. ဘက်ထရီစွမ်းရည်: 1800mA;
၃။ အားသွင်းချိန် - မြန်သောအားသွင်းခြင်း၊ ၁.၅ - ၂ နာရီအတွင်းလျှပ်စစ်မီးမရဘဲအပြည့်အ ၀ အားသွင်းနိုင်သည်။
၃။ အသုံးပြုသောအချိန် - ထွက်ပေါ်လာသော current သည် ၂.၀A ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် 8V ဗို့အားအောက်တွင် ၇ နာရီကျော်ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်၊ ဗို့အားတည်ငြိမ်ပြီးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုကို ၈ နာရီခန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၄။ LCD မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်မှု - အလုပ်ချိန်ရေတွက်ခြင်း (နာရီမိနစ်ခန့်) + ဂဏန်းနှစ်လုံးပါသော output ဗို့ + ဘက်ထရီစွမ်းရည်။
5. Motor: Coreless motor (9V12000 revolutions);
6. ခရီးသွားလာအကွာအဝေး: 0-0.35mm;
၇။ Starting voltage - memory function ဖြင့်စတင်သော voltage သည်နောက်ဆုံး shutdown voltage ၏တန်ဖိုးဖြစ်သည်။
8. အလုပ်လုပ်ဗို့အားအကွာအဝေး: 5-12V;
အဆိုပါကိရိယာသည်နူးနှင့်ချိတ်ကြိုးမပါဘဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည့် built-in lithium ဘက်ထရီပါသည့်တက်တူးထိုးတံပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ ၁။ လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက် ၂။ တက်တူးထိုး၏အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်၊ lithium ဘက်ထရီ၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုအစားထိုးရန်အလယ်ပိုင်းကိုဝက်အူဖြုတ်နိုင်သည်။
၁။ ပါဝါဖွင့်ခြင်း - အလယ်“ O” ခလုတ်ကိုကြာမြင့်စွာ5စက္ကန့်ကြာအောင်နှိပ်ပြီး၊ ပြီးနောက်ပါဝါပိတ်ရန် ၅ စက္ကန့်ကြာအောင်နှိပ်ပါ။
၂။ ခေတ္တနားခြင်း။ : ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းအလုပ်ကိုခေတ္တရပ်ရန်“ O” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၃။ ဗို့အားကိုချိန်ညှိပါ။ + + သို့မဟုတ်“ -” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဗို့အားအကွာအဝေးကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်အချိန်တိုင်း 0.5.5V ညှိခြင်း၊ အနိမ့်ဆုံးဗို့အား: 5V, အများဆုံးဗို့အားသည် 12V;
၄။ ဘက်ထရီပြသခြင်း - LCD မျက်နှာပြင်တွင်ပြသပြီး ၄ လုံးကိုဆဲလ် ၄ ခုထိအပြည့်သွင်းသည်။ နောက်ဆုံးဆဲလ်ကျန်သောအခါဘက်ထရီအားသွင်းရန်လိုအပ်သည်။
၅။ နေ့စဉ်အားသွင်းခြင်း - အပြင်အားသွင်းသည့် port၊ အားသွင်းရန် Android USB data cable ကိုအသုံးပြုပါ။
၆။ လီသီယမ်ဘက်ထရီအာမခံ: တစ်နှစ်အာမခံ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ထက်ဝက်ကိုအစားထိုးရန်သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သည်။
ပါဝါ parameters များကို:
၁။ Input - USB Device ကိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာ Lithium Battery ကိုထည့်သွင်းပါ။ Built-in ဘက်ထရီသည် ၃ ပိုင်း၊ ၆၀၀ mA / piece၊ 3.7V ဘက်ထရီဖြစ်သည်။
၂။ Output: Output current ကို 2A တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး lithium battery သည် switch key ကို အသုံးပြု၍ power သိုလှောင်မှုကိုလွှတ်ပေးပြီးတက်တူးပင်ကိုစတင်ရန် built-in motor သို့ပါဝါဖြည့်သည်။ Voltage range: (5-12V) voltage range ကိုပြောင်းရန်“ +” or“ -” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ 5V သည်အနိမ့်ဆုံး voltage၊ 12V သည်အမြင့်ဆုံး voltage နှင့်ညှိနှိုင်းမှုပမာဏတိုင်းသည် 0.5V;
ရှေ့သို့ Body Art Art Blank Back နောက်တက်တူးထိုးလေ့ကျင့်ခန်းအရေအတွက် soft silicone အကြီးစားလေ့ကျင့်ရေးအရေပြား
နောက်တစ်ခု: 30mm Gradient အရောင် Adjustable Tattoo Cartridge Grip
ကျည်တောင့်က Tattoo စက်
မိတ်ကပ် Tattoo ကလောင်အမည်
မိတ်ကပ် Tattoo ကလောင်စက်
ဘောပင် Rotary Tattoo စက်
ဘောပင် Tattoo သေနတ်
ဘောပင် tatwoo စက် Kit
အမြဲတမ်း Tattoo စက်ကလောင်အမည်
Rotary Pen Tattoo
Rotary Pen Tattoo သေနတ်
Rotary Pen Tattoo စက်ကိရိယာအစုံ
Semi အမြဲတမ်းတက်တူးထိုး Pen
Tattoo Battery ကလောင်တံ
Tattoo Machine Pen Kit
Tattoo စက် Rotary Pen
Tattoo Machines Pen
Tattoo Pen အပ်
ကြိုးမဲ့ Tattoo စက်ကလောင်
Thunderbolt II လီသီယမ်ဘက်ထရီ Tattoo ကလောင်
Splendor Tattoo Pen စက်၊ ၂၂ * ၂၅ Coreless Motor
Trident II လီသီယမ်ဘက်ထရီ Tattoo ကလောင်
Lightning II Lithium Battery Tattoo ကလောင်တံ
မုန်တိုင်း II Lithium Battery Tattoo Pen
အဆောက်အ ဦး #9Zongtang ခရိုင် 1 322000 Yiwu Zhejiang China